IFTIINKACUSUB.COM: Haweeney si dhibyar u taajirtay .
Haweeney si dhibyar u taajirtay .
Zhou Qunfei ,Waxay ka midtahay haweenka ugu dhaqaalaha badan aduunka balse dad badan ma yaqaanaan. Gabadha lagu magacaabo Zhou Qunfei waa gabadha ugu dhaqaalaha badan wadanka Shiinaha waana aasaasaha shirkada Lens Technologies balse wadada ay soo martay ayaa cashar muhiima u ah cidkasta oo doonaysa in ay ganacsi abuurato.
Zou o hada 45-sano jir ah ayaa ku soo kortay tuulo yar oo ku taala bartamaha Shiinaha, hooyadeed waxay geeriyootay iyadoo 5 sano jir ah, halka aabaheed uu ahaa indhoole ka dib markii uu shil ka dhacay warshadii uu ka shaqeynayay. Waxay iskuulka ka tagtay markay 16 sano jirtay ka dib markii ay iska bixin-wayday qarashkiisa.
Ka dibna waxay shaqo ka heshay warshad samaysa shaashadaha saacadaha, iyadoo ka bilowda heerka ugu hooseeya balse markii dambe ka midnoqotay dadka ugu sareeya shirkadaas isla markaana baratay sida loo sameeyo dhalooyinka. Ka dibna waxay abuuratay shirkad iyadu ay leedahay oo samaysa shaashadaha saacadaha. Maanta ayaa Zhou waxaa lagu qiimeeyaa hantideeda ku dhawaad 10$ bilyan oo dollar balse sidaasi oo ay tahay waxay wali tahay qof xishood badan oo aan jeclayn is-qaad-qaadka.
Hadaba maxay ku gaadhay guushka ganacsiga? dhowr arimood ayaa saldhig u ah, oo ay ka midyhiin.
1. Hawl-kar ayay ahayd – Zhou iskuulka aad ayay ugu fiicnayd balse markii ay isaga tagtay waxay noqotay shaqaale, iyadoo aad u baratay shaqadeeda isla markaana ahayd shaqaale aad u firfircoon. Sadex bilood ka dib markii ay shaqada bilowday ayay codsi u dirtay madaxa shirkada iyadoo ka codsatay in la dalacsiiyo. Markasta hadafkeedu waxa uu ahaa in ay heer sare gaadho.
2. Waxay fahantahay shaqadeeda – Maadaama ay ka soo bilowdya shaqada meel hoose isla markaana ay heer sare ka gaadhay shirkadii ay u shaqeynaysay, waxay aad u baratay shaqada iyo sida loo sameeyo shaashadaha. Taasi waxay keentay in markii ay ganacsigeeda furatay ay u fududaatay socodsiintiisa maadaama ay si fiican u taqaano shaqadeeda. Xitaa mararka qaar ayay ka shaqaysaa warshadaha ay leedahay taasi oo tasaale wanaagsan u ah shaqaalaheeda oo kumanaan gaaraya.
3. Marnaba isma dhiibin – Zhou waxay shirkadeeda ku aasaastay 3000$ dollar taasoo ahayd lacag aad u yar, waxay labo goor iibisay gurigeeda si ay u bixiso mushaaraadka shaqaaleheeda balse marnaba ma aysan go’aansan in ay xirto shirkadeeda oo aan faa’iido soo saarin. Muddo dheer ayay ku qaadatay intii ay shirkadeedu faa’iido gaari lahayd balse marnaba isma dhiibin Zhou.
4. Waxay la socotay isbedalka caalamka – Zhou iyo shirkadeedu waxay markii hore ku taqasuseen samaysa shaashadaha saacadaha balse markii ay soo bexeen moobeelada cusub ee la taabto ayay halkaasi ka heshay fursad cusub oo ganacsi, iyadoo maanta shirkadeedu ay tahay mida ugu sareysa samaynta shaashadaha moobeelada sida Iphone, Samsung iyo kuwa kale.
5. Marnaba ma hilmaamto qofka ay tahay – Inkastoo ay horumar weyn oo ganacsi gaadhay ayaa Zhou lagu tilmaamaa qof aamusnaan badan oo deggan. Waxay aad u dhagaysataa shaqaalaheeda, iyadoo marka ay hadasho dadku wada dhagaystaan. "Waxaan isleeyahay waa muhiim in uusan qofku is-qaad-qaadin marka uu horumar gaaro, dhulkana isdhigin marka ay xaaladu ku adkaato" ayay Zhou u sheegtay wargeyska Times.